गगनले थेग्लान त साझा पार्टीकी २६ वर्षिया सुबुनाको चुनौती ? | Capital Khabar ::
गृह देश गगनले थेग्लान त साझा पार्टीकी २६ वर्षिया सुबुनाको चुनौती ?
गगनले थेग्लान त साझा पार्टीकी २६ वर्षिया सुबुनाको चुनौती ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट २३ वर्षिया रञ्जु दर्शनालाई उम्मेदवार बनाएको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौं ४ मा यसपटक गगनलाइ चुनौती दिदै २६ वर्षिया सुबुना बस्नेतलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
रञ्जु भने यसपटक २५ वर्ष उमेर नपुगेका कारण उम्मेदवार बन्ने छैनन्। सुबुनाको प्रतिस्पर्धा यसपटक काँग्रेसका नेता गगन थापासँग हुनेछ। थापा यसअघि पनि काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट विजयी भैसकेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसको काठमाडौं क्षेत्र नं ४ मा भोट घटेको छ। त्यहाँ एमालेको भोट बढेको छ भने बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ।
एमालेले सांसद राजन भट्टराईलाई क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको छ। २६ वर्षिया सुबुनाको प्रतिस्पर्धा गगन थापा र राजन भट्टराईसँग हुने प्रबल सम्भावना छ। इलाममा जन्मेकी सुबुनाले राजधानीकै किंग्स कलेजबाट एमबिए गरेकी छिन्। उनी चार वर्ष अघि विवेकशील नेपाली मञ्चमा सक्रिय हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्।
विराटनगरको बिरामीलाई रगत खोजिदिन सहयोग पुर्‍याउने संस्था युथ फर ब्लड हुँदै सामाजिक कार्यमा संलग्न सुबुना अहिले विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत छिन्। पार्टीमा उनले उद्यमशीलता र विकास विभागको नेतृत्व गरिसकेकी छिन् ।
अघिल्लो लेखमानेपालको पहिचान झल्काउन तीन सय युवा रसियातिर
अर्को लेखमाटयाक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान